प्रतिलिपि बिल्ली सबै भन्दा राम्रो कार्टून-शैली खेल भनेर कुनै पनि मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ मध्ये एक छ शीर्ष क्यासिनो स्लट साइट. विषय लोकप्रिय 'टम र जेरी' शो को सम्झना दिलाउँछ र पनि साँच्चै हास्यास्पद देखिन्छ. यो स्लट वरिपरि अपार्टमेन्ट संग शहर को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ, एक उज्ज्वल घाम दिन. त्यहाँ संग पाँच रील छन् 25 paylines र खेल तपाईं आफ्नो प्राथमिकता प्रति रूपमा शर्त स्तर र सिक्का मूल्य समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ. £ 0.25 र £ 250 प्रति स्पिन बीच सट्टेबाजी सीमा छ. त्यहाँ खुसीसाथ मुड सिर्जना गर्ने एक कार्टून शैली ज्याज पृष्ठभूमिमा संगीत छ.
प्रतिलिपि बिल्ली विकासकर्ता बारेमा
यो रंगीन कार्टुन शैली स्लट खेल भनेर मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ शीर्ष क्यासिनो स्लट साइट NetEnt विकास भएको थियो. एक धेरै लोकप्रिय आफ्नो सूचीमा विभिन्न फरक खेल शीर्षक सयौं अनलाइन गेमिङ क्यासिनो समाधान प्रदायक.
यो एक रंगीन विषयवस्तु र आकर्षक प्रतीक संग धेरै नेत्रहीन आकर्षक खेल हो. को प्रतीक रातो हास्यास्पद अनुहार बिरालो हो, गुलाबी प्यारा अनुहार बिरालो, एक क्रोधित अनुहार नीलो बिरालो, एक खेलौना माउस, दूध बोतल र माछा हड्डी. रातो हास्यास्पद अनुहार बिरालो संग शीर्ष तिर्ने प्रतीक हो 200 आफ्नो तरिका को पाँच तपाईंको खम्बामा पटक. यो तल्लो मूल्य प्रतीक शीर्ष क्यासिनो स्लट साइट खेल चार अलग अलग रंग बिरालो पन्जा प्रिंट छन्. उनीहरूले भुक्तानी 25 एक प्रकारको पाँच मा पटक आफ्नो खम्बा प्रत्येक. सुनको बिरालो प्रतीक र बिरालो गरेको घाँटी टाई घण्टी बोनस प्रतीक हो.
जंगली बोनस: सुनको बिरालो जंगली प्रतीक हो र यो घण्टी प्रतीक बाहेक सबै को लागि विकल्प. पहिलो रील ढाक्न गर्दा स्ट्याक गठन मा जंगली देखिन्छ, यो copycat सुविधा ट्रिगर. यस मामला मा, जंगली मा रील दुई देखि सबै बिरालो गरेको प्रतीक पाँच पालो गर्न.
स्क्याटर बोनस: घंटी प्रतीक यस को स्क्याटर सुविधा छ शीर्ष क्यासिनो स्लट साइट खेल. यो रील एक मात्र देखिन्छ, तीन र पाँच. जब सबै तीन प्रदर्शनमा उत्पन्न, तपाईं दस मुक्त spins सम्मानित छन्. यी spins हुन पनि निःशुल्क खेल समयमा पुन: ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ.
Copycat विशेषता: कुनै पनि बिरालो प्रतीक को एक पूर्ण थाक यो सुविधा सक्रिय. हुँदा, सबै को रील अन्य बिरालो प्रतीक सुविधा ट्रिगर कि बिरालो परिणत. यो एक शीर्ष-मूल्यवान प्रतीक भएकोले रातो बिरालो copycat क्रियाशीलता भने त तपाईं उच्चतम खम्बा जीत.
यो सबैभन्दा रंगीन र सुविधा-सम्पन्न खेल भनेर कुनै पनि मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ मध्ये एक छ शीर्ष क्यासिनो स्लट साइट. खेल मा ग्राफिक्स र एनिमेशन तपाईं आफ्नो सत्र भर मनोरंजन राखन.